Talooyinka ugu sarreeya ee laga yaabo in laga yareeyo qaabka loo xakameyn karo dadka loo yaqaan Pop-Ups iyo Ads on Your Android
Ka takhalusidda xayeysiiska iyo pop-ups ee saameeya waayo-aragnimada adoo adeegsanaya, markaad isticmaalayso qalabyada Android, ma aha oo kaliya inaad ilaaliso qalabkaaga laakiin waxay kaloo kaa caawineysaa keydinta xogta. Xayeysiiska, pop-ups, iyo xayeysiisyada caadiga ah ma aha oo kaliya wacyigalinta laakiin waxay sidoo kale u saameyn kartaa badbaadada qalabkaaga Android. Isticmaal ahaan isticmaalaha Android, ma rabtid inaad bixiso lacag dheeraad ah oo ku saabsan xayeysiinta pop-up-ka iyo xayeysiiska dhibka badan
Warshadaha suuq-geynta casriga ah, spammers iyo hackers ayaa isticmaalaya xayeysiis si ay u dhameeyaan isticmaalka qalabka Android. Isticmaalka internetka khadka ayaa khatar weyn ku ah ammaankaaga internetka wuxuuna kuu keenayaa khasaare aad u daran. Farsamooyinka qaar ayaa loo soo bandhigay si ay u caawiyaan dadka isticmaala xayiraadaha casriga ah ee xayeysiiska ah ee dhabta ah
Xayiraadda xayeysiiska dhibcaha iyo pop-ups ka browser-gaagu waa mid ka mid ah hawlaha ugu fudud ee aad abid internetka. Ka ilaalinta aqoonsigaaga in laga helo scammers waa mid aad u muhiim ah marka ay timaado booqashada - race day hats and fascinators nzd.
Waa kuwan afar talooyin oo ay soo saartay Igor Gamanenko, khabiir hormood ah oo ka socda Semt , kaas oo kaa caawin doona inaad haysato khibrad aad u wanaagsan markaad eegayso boggaga internetka ee waaweyn adigoo isticmaalaya qalab aad ujuuro ah
Isticmaal browser kumbuyuutar si aad u xakameyso xayeysiiska
Su'aalaha qaar ayaa la soo saaray oo la xidhiidha sida loo xakameeyo pop-ups soo muuqanaya ee shabakada chrome. Xayiraadda xayeysiiska pop-up ee muuqanaya browserka chrome waa mid aad u fudud. Fur furahaaga oo guji saddex dhibcood oo lagu soo bandhigay dhinacaaga bidix ee kore ee shabakadaada. Xulo astaanta 'Settings' iyo fur 'icon Settings' icon.
Ku dhaji goobahaaga biraawsarkaaga 'Booga' Pop-ups '..Xulo 'Block popups ads' si looga hortago xayeysiisyada caadiga ah inay khatar galiyaan khibradaada daalacashada.
Soo daji oo geli gambarka xayeysiinta ah ee xayeysiinta ah
Sida isticmaalaha Android, ha u oggolaan in xayaysiisyada pop-ups inay saameeyaan taariikhda daalacashadaada. Furo Google Play Store qalabka wax lagu qoro oo ka goo bixi 'xayeysiiyaha xayeysiinta ee lacag la'aanta ah'. Soo daji cinwaanka lacag-bixiyaha oo lacag la'aan ah. Tirada wanaagsan ee macaamiisha iyaga oo isticmaalaya orroids waxay doorbidaan isticmaalka Ad-Blocker marka la barbardhigo xakamaynta pop-ups gacanta
Isticmaal Opera Browser si aad u xannibsato xayeysiiska dhibsado
Miyaad tahay user user oo ku shaqeeya sidii loo xakameyn lahaa xayeysiiska pop-up. Xayeysiinta xayeysiinta heerka iyo dhacdooyinka waa hawl aad sameeysid adiga oo si wax ku ool ah u fulin kara adiga oo isticmaalaya qalab aad u dooratid. Furto dukaanka Google-da ee qalabka gadashada iyo soo-dejinta codsiga.
Ku rakib oo maamul kambiyuutarkaaga bilaashka ah si aad u xannibsato xayeysiisyo dhibsado oo saameynaya khibrada internetka ee internetka. Furo shabakada shabakada internetka oo aad gujiso pop-ups. Riix 'Isticmaalka xayeysiinta pop-up' si aad uga hortagto xayeysiisyada suuq-geynta si looga hortago qorshahaaga booqashadaada
Isticmaal habka kaydka xogta Android
Sida user aroid, aadan rabin inaad isticmaasho macluumaad dheeraad ah si aad u soo dejiso xayeysiisyada marketing iyo dhacdooyinka. Badbaadinta xogta waxay bixisaa dadka isticmaala Android khibrada ugu fiican ee xayeysiinta ah sida xayeysiiska dhibka badan, iyo nidaamyada suuq-geyntu ma kari karaan qalabyada. Si kastaba ha noqotee, waxaad awood u yeelan kartaa inaad kaydiso xogtaada haddii aad ku aragto muraayadaha lagama maarmaanka ah iyo bogagga shabakadda ee muhiim u ah.
Si aad u suurtogasho habka kaydka xogta, u fur browserkaaga oo guji sadexda dhibcood ee dhinacaaga midigta sare. Dooro goobahaaga browser iyo dooro xogta kaydka xogta. U geli habka badbaadiyaha si aad u xannibsato xayeysiisyada dhibsado si aad khatar ugu geliso khibraddaada internetka.
Bilaha dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, su'aalaha la xidhiidha sida loo xareeyo xayeysiiska pop-up-ka ayaa ku dhuftey madaxyada si khaas ah. Ha u oggolaanin xayaysiinta in ay khibradaaga internetka ku burburiso markaad isticmaaleysid qalab casri ah. Samee talooyinka kor ku xusan si aad u gaarto dhammaan khibradaha kormeerka leh.